अयोग्यताको लाजले अतिवाद- विचार - कान्तिपुर समाचार
अयोग्यताको लाजले अतिवाद
फाल्गुन ४, २०७८ विष्णु सापकोटा
रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत अयोग्यताका लाजलाई ढाक्न जसरी एउटा वा अर्को अतिवादतिर रुझान देखाइरहेका छन्, त्यसले गर्दा आफूले नेतृत्व गर्ने पार्टीको ‘डीएनए’ नै फेरिने प्रक्रिया पनि सायद सुरु भइसकेको छ । सायद उनीहरूलाई यो यात्राको वैचारिक गन्तव्य के हो या यसको गन्तव्य नै छ कि छैन भन्ने पनि थाहा छैन । र, आफ्नो असरल्ल पोखिइरहेको अयोग्यताको लाजले उनीहरू विभिन्न विशेषताका अतिवादलाई आफ्ना पार्टीमा समाहित बनाउन प्रवृत्त भएका छन् ।
जति समावेशी हुन खोजे पनि सबै पात्रको विवेचना गर्नका लागि ठाउँ त पुग्दैन नै, त्यसैले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीबाट सुरु गरौं । ओलीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ‘उपलब्धि’ भनेको एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनु अनि त्यसपछि माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन गरी ‘७० वर्षको नेपाली कम्युनिस्ट सपना’ लाई साकार पार्नु थियो । त्यसबीच भारतीय नाकाबन्दीका बेला अडान र संविधान जारी गर्ने बेलाको भूमिका उनको लेगेसीसँग जोडिन सक्ने कुरा थिए । र, उनको संघर्षको इतिहास के हो त भन्दा, उनी चौध वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन् । अब यी सबै कुरालाई एकैछिन् गहिरिएर सोचौं ।
विगतका वर्षमा उनले पटकपटक सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्- उनी लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो समय जेल बसेका थिए । जबकि उनी २०४४ सालमा जेलबाट निस्कँदासम्म तत्कालीन नेकपा मालेमा लोकतान्त्रिक भँगालोमा मिसिने कि नमिसिने भन्ने बहससम्म सुरु भएको थिएन । उनी जेल बसेको ‘साम्यवाद’ का लागि थियो, लोकतन्त्रका लागि थिएन । तर मूल विषय त्यो होइन । एउटा सिद्धान्तका लागि जेल बसेको राम्रो, अर्कोका लागि बसेको कस्तो भन्ने विषय पनि छुट्टै बहसको कुरा हो । अहिलेको सन्दर्भ के हो भने, ओलीलाई भित्रभित्र कति पीडा हुँदो हो कि उनी जुन कारणका लागि त्यति लामो समय जेलमा बसे, उनी आफैंले त्यो कारण स्वयंलाई अहिले बंग्याएर भन्नुपरेको छ । हैन, यदि उनलाई त्यो साँच्चै लोकतन्त्रकै लागि थियो भन्ने लाग्छ- किनकि वामपन्थीले पनि त जनवाद भनेकै हुन्छन्- भने फेरि माओवादी ‘जनयुद्ध’ देखि अहिलेका अरू फुटकर कम्युनिस्टसम्मले गरेका सबै ‘संघर्ष’ पनि त्यही लोकतन्त्रका लागि हुन् त जुन अहिलेको संविधानले आत्मसात् गरेको छ ? होइनन् ।
हुन त त्यो सुरुदेखि नै कृत्रिम थियो । तर एमाले र माओवादीको ऐतिहासिक भनेर बिगुल फुकिएको एकता जोगाउने क्षमता ओलीमा एकरती देखिएन । त्यति मात्र भए पनि हुन्थ्यो । ‘एकता’ अघिको त्यस्तो सग्लो एमाले, जसको जिम्मा कार्यकर्ताले उनलाई दिएका थिए, छिन्नभिन्न भएको छ । उनको आफ्नै अर्को लेगेसी थियो, पार्टीभित्र माओवादी उग्रताको डटेर विरोध गर्ने । अब त्यही उग्रताभित्रका पनि उग्र रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई आफ्नो उपाध्यक्ष अनि टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई नेतृत्वमा ल्याएपछिको एमाले अध्यक्षले माओवादीका तत्कालीन क्रियाकलापप्रतिका आफ्ना पूर्वकठोरतालाई सधैं संशोधन गर्नुपर्नेछ । किनकि तिनै माओवादी अब एमाले हाँक्ने सहजिम्मेवारीमा आएका छन् । आफ्नो अयोग्यताका कारण जोगाउन नसकेको नेकपाको र एमाले स्वयंको एकतालाई बादल र भट्टहरूले ल्याउने दुई–चार सय कार्यकर्ताले कति टाल्लान्, देखिइहाल्ने नै छ । तर यहाँनेर पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न एमाले आगामी चुनावमा कत्रो पार्टी होला भन्ने होइन । मूल कुरा, एमाले सीके राउतदेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सम्म र राप्रपाबाट उछिट्टिएकादेखि हरेक कित्ताका, ओलीकै पहिलेका शब्दमा, उग्रवादी र अतिवादीजतिसँग समीकरण गर्ने तत्परताको सम्भावना देखाएर आफ्नो डीएनए नै फेर्ने बाटोमा जान लागेको हो ? एउटा मार्क्सवादी पार्टीको नेता र कमरेडबाट घटुवा भएर ‘बा’ बन्न चाहन्छÙ मौका पर्नासाथ इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मार्क्सवाद कम, पूर्वीय दर्शनको विशालता आफ्नो आदर्श भएको हाकाहाकी भन्छ र बजारमा उपलब्ध सबै खाले कन्जरभेटिभलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्न तत्पर रहन्छ भने त्यो पार्टीको आत्मा त्यही नै रहन्छ जुन पहिले थियो ?
ओली आफैंले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर बनाएको संविधानलाई आफैंले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटनको प्रयास गरेर खण्डित गरे । नाकाबन्दीका बेलाको राष्ट्रवादी अडान प्रधानमन्त्री छँदै गोप्य रूपमै खुफिया प्रमुखमार्फत फिर्ता गरे । सग्लो पार्टीलाई विभाजनमा जाने बनाए । यो सबै असफलता र अयोग्यताको लाजले अहिले उनी कसका मित्र हुन् र कसका होइनन्, थाहै छैन । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बारे यसरी थाहै हुन छाडेको भने ओलीको भन्दा पनि धेरै लामो समय भयो । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दाको मूल भाष्य थियो- संसदीय प्रजातन्त्रमा यति धेरै विकृति देखिए कि यसबाट हुँदै हुँदैन । इतिहासको व्यंग्य नै भनौं, २०६३ पछि नेपालको लोकतन्त्रलाई पहिलेको भन्दा पनि विकृत बनाउने अभियानको नेतृत्व पनि प्रचण्ड स्वयंले गरिराखेका छन् । नेपाललाई गणतन्त्रमा लगेको जस पनि उनले दाबी गर्न मिल्दैन । किनकि उनले त सकेसम्म राजासँग मिलेर संसद्वादी पार्टीलाई पाखा लगाई आफू सत्तामा आउन खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा अब सार्वजनिक रूपमै स्विकारिएका तथ्य भएर स्थापित छन् ।
माओवादी आन्दोलनले अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका समुदायका मुद्दालाई बहसको अग्रस्थानमा ल्याएको त हो तर सत्ता राजनीतिमा आएपछिको माओवादी नेतृत्वको आफ्नै सांस्कृतिक पतनको गहिराइ र विचलनका अनगिन्ती शृंखलाले गर्दा उसले ती मुद्दामा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्ने वैधता गुमाइसकेको छ । भन्न त परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता दुई जनामध्ये एक भनेर आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मौका पाउनासाथ जोडिहाल्छन् प्रचण्डले, तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिको उनको अयोग्यताले गर्दा उनलाई अस्थिर राजनीतिकर्मीको पदवी दशकअगाडि नै मिलेको थियो । अहिले उनको हैसियत केवल राजनीतिक ओत खोज्ने एक अलपत्र पात्रका रूपमा खुम्चिएको छ । माओवादी आन्दोलनको व्यावहारिक अवस्था भनेको यसको विसर्जन भई नै सक्यो । यस्तो स्थितिमा आफ्नो अयोग्यताको लाजले प्रचण्ड थप जता पनि ढल्किन सक्छन्, जे पनि बोल्न सक्छन् र जसका पनि हुन सक्छन्Ù आफूले जसका लागि लडें भनेका थिए, ती जनताको बाहेक । राजनीतिमा टिक्ने अहिलेका उपाय पनि सकिए भने भविष्यमा उनले माओवादीले बिसाइसकेका इतिहासका अतिवादतर्फ फर्कने कोसिस फेरि गर्न सक्नेछन् ।
सानोतिनो जस्तो भए पनि आफ्नो राजनीतिक स्पेस बनाउनका लागि शरण खोजेका सीके राउतदेखि विप्लवसम्मको मात्र कुरा कहाँ भयो र ? तिनीहरूको सुरुवात नै असफल हुन योग्य थियो र भई नै सक्यो । उनीहरूले अब गर्ने भनेकै आफूतिर ध्यान खिच्न सक्ने दुई–चारवटा केही ‘स्टन्ट’ र ओली वा त्यस्तै कुनै बहुरूपी राजनीतिक मानस पिताको काख लागेर केही ‘हासिल’ गर्ने हो । तर आफूलाई मधेश आन्दोलनको एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधि दाबा गर्ने उपेन्ı यादवदेखि महन्थ ठाकुरसम्म एकातिर र आफ्नो इतिहास अर्कातिर भएका छन् । ठाकुर र राजेन्ı महतो मधेस आन्दोलनप्रति सबैभन्दा बढी अनुदार शक्तिसँग सत्तामा मात्र नभएर मानसिक रूपमै जुन दिनदेखि जसरी ऐक्यबद्ध भए र जुन बाह्य शक्तिप्रति उनीहरू अहिले पनि नतमस्तक नै छन् भन्ने देखाए, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो अयोग्यताका लागि अरूलाई दोष दिनेबाहेक अन्य विकल्प नभएको स्थितिमा पुगेका छन् ।
हुन त सुरुमै चर्चा गरेको भए पनि हुने थियो तर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पृष्ठको जुन ठाउँमा लगेर राखे पनि हुन्छ । पछि इतिहासको किताबमा उनलाई खोज्दा उनी भएको पन्ना हुने पनि अध्यायको कतै पुच्छरतिरै हो । किनकि प्रधानमन्त्री त सायद पाँचौंपटक भएका छन् क्यारे, अहिले र भविष्यमा पनि होलान्, तर इतिहासले उनलाई सम्झिने प्रत्येक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कुनचाहिँ पटक केके बिगारेका थिए भनेर हो । उनको स्वर्णिम काल त्यही हुने पक्का छ जुनमा उनले खासै केही पनि (काम) गरेनन् । किनकि उनी २०५२ सालमा पहिलो पटक यो पदमा गएदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ गएको केवल त्यहाँ जानका लागि मात्र हो । के गर्न नेतृत्वमा जाने भन्ने उनले कहिल्यै बताउनुसमेत परेको छैन । कांग्रेस पंक्तिको सामूहिक असफलता र अयोग्यताको सिँढी नै उनका लागि सफलताको एकल बाटो भएको छ, पटकपटक । त्यसैले उनी सत्ता सुरक्षाका लागि मिल्नुपर्ने सबैसँग त्यसरी नै मिल्छन् जसरी अहिलेसम्म मिल्दै आएका छन् ।
सत्तामा जानका लागि बाटो बनाउन र त्यहाँ गएपछि गरेका सम्भावित अपराधको जवाफदेहीको मूल्य भविष्यमा चुकाउनुपर्ने भयले गर्दा राजनीतिकर्मीमा अयोग्यताले ल्याउने असुरक्षाभाव आम मानिसको भन्दा गहिरो हुन्छ । त्यसैले उनीहरू आफू केका लागि राजनीतिमा आएको थिएँ भन्ने त सजिलै बिर्सिन्छन् । अनि उनीहरूको एक मात्र ध्याउन्न कुन हिसाबमा सानोतिनो शक्ति आर्जन गरिरहने भन्ने मात्र हुन्छ, जसका कारण प्रकट हुने उनीहरूको विक्षिप्ति र निजी कुण्ठाको परिणाम देशले चुकाउनुपरिरहेको मूल्यमा परिणत भइहाल्छ । लेखमा उदाहरणस्वरूप चर्चा गरिएका केही पात्रबाहेक अरूलाई पनि सम्झौं त, कति छन् नेपालमा आफ्नो अयोग्यताको लाजले ‘पपुलिजम’ र अतिवादतर्फ लागेका/ लाग्न खोजेकाहरू ?
प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७८ ०९:११
बौद्धिक संस्कृतिमा मार्क्सवादी छाया
जब तपाईं हरेक कुरामा माक्र्सले भनेजस्तो वर्गको सेवा खोज्नुहुन्छ, तब तपाईंलाई लिओनार्दो दा भिन्चीको मोनालिसा अर्थहीन लाग्छ । शेक्सपियरकावियोगान्त किन महान् छन् भन्ने अनुमति तपाईंलाई हुँदैन । महाकवि देवकोटाको स्वच्छन्दतावादले गर्नुपर्ने वर्गको सेवा गर्दैन भन्ने लाग्छ।
यो वृत्तमा अलोकप्रिय भइएला कि त्यो वृत्तमा भन्दाभन्दै, राम्रै खुबीका कतिपय लेखकहरू हेर्दाहेर्दै भुत्ते भएका अनगिन्ती उदाहरण समकालीन नेपालमै बग्रेल्ती छन् ।
मंसिर १, २०७८ विष्णु सापकोटा
सांस्कृतिक पुनर्जागरण भने पनि या आधुनिक बौद्धिक परम्पराको सुरुआत, नेपालमा यसको इतिहास सय वर्ष पुग्न पनि बाँकी नै छ। विक्रम संवत् १९९०–२००० को दशकभन्दा पाँच–सात सय वर्षअगाडिको ‘भारतवर्ष’का जुन सामूहिक ज्ञान परम्पराहरू छन्, तिनलाई अहिलेका आधुनिक राज्यहरूले गच्छेअनुसार आफ्नो भनेर दाबी गर्ने कर्म त इतिहासको नियमित प्रक्रिया नै हो ।
यो चली नै रहनेछ। तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा, सय वर्षभन्दा अगाडिका, नेपालको बौद्धिक संस्कृतिका पाँच–सात सय वर्ष शुष्क थिए । त्यो इतिहासलाई त त्यति धेरै सच्याउन नसकिएलातर वर्तमान नेपालको परिदृश्यमा हामीले सच्याउनपर्ने र सकिने केही कुरा छन् ।
लेखको मूल ‘हाइपोथेसिस’लाई, घुमाउरो बाटो नगई, सुरुमै उल्लेख गरौं । नेपालको ‘आफ्नो’ बौद्धिक–सांस्कृतिक चेतनाको विस्तार र प्रजातान्त्रिक अभिलाषाका जागरुकताका अभियानहरू विक्रम संवत् १९९० को दशकमा एकैचोटि सुरु भएका हुन् । विश्वपरिवेशमा उत्तरऔपनिवेशिक कालको सुरुआत र छिमेकका स्वतन्त्रता एवं लोकतान्त्रिक अभियानका राजनीतिक सन्दर्भहरूको प्रभाव त त्यसमा हुने नै भयो। त्यस हिसाबमा नेपालको आधुनिकताको सांस्कृतिक र राजनीतिक सुुरुआतएकैचोटि भएकोहो । बौद्धिक इतिहासको प्राज्ञिक विधाले राजनीतिक चिन्तन प्रणाली, दार्शनिक उथलपुथलर कला–संस्कृतिले कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा एकअर्कालाई पारेको प्रभावलाई नछुट्याई, एकै ठाउँमा राखेर हेर्छ। ढिलो प्रारम्भ भए पनि विक्रमको एक्काइसौं शताब्दीका प्रथम तीन दशकको बौद्धिक विस्तार समग्रमा सन्तोषजनक थियो । आफ्नै विशाल जग नहुँदै, आफ्नो विश्वविद्यालय भर्खर खुलेको परिदृश्यमा त्यतिको विस्तारलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरिनुपर्छ । तर ’३० को दशकमा विस्तार भएको र वर्तमानसम्म झाँगिएको नेपालको मार्क्सवादी चिन्तन परम्पराले समग्रमा हाम्रो राष्ट्रिय बौद्धिक परम्परालाई फराकिलो हुनबाट रोकेको छ । यसले नेपालको भनेर दाबी गर्न मिल्ने आफ्नै (पूर्वीय) ज्ञान परम्परा र बाँकी ‘विश्व’का समकालीन परम्पराका विविधतासँग संवाद गर्ने दायरा खुम्च्याएको छ ।
यति पढ्दै गर्दै केही ‘बौद्धिक’हरू अलिकति ‘प्रोभोक’ भइसकेको हुनुपर्छ । अलिकति ‘प्रोभोकेटिभ’ प्रस्तावना सचेत रूपमै गरिएको हो। किनभने, त्यसै पनि नेपालको तथाकथित बौद्धिक वृत्त त्यस्तै चार–पाँच सय मानिसको घेरामा होला। बौद्धिक, चिन्तक, लेखक, प्राध्यापक जोजो हुन्, सबै मिलाउँदा, तिनीहरूमध्ये धेरैले धेरैलाई व्यक्तिगत रूपमै चिन्छन्/चिनिन्छ। चिनजान त राम्रै होतर त्यसको गैरसृजनशील पाटो छ । एउटा विषयमा एक थोक लेख्न बस्यो, एक जना परिचित ‘मित्र’को अनुहार सम्झनामा आउँछ । ऊ रिसाउला भनेर या त त्यो विषयमा प्रवेशै नगर्‍यो या लेखे पनि बोधो भाषामा केही लेख्यो। अनि अर्को विषयमा अर्को दृष्टिकोण लेख्न बस्दा, अर्को कुनै मित्रलाई सम्झ्यो। अनि त्यो रिसाउला भनेर त्यो पनि नलेख्यो । सबैमा हैन, तर कतिपय लेखक र बौद्धिकमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै बौद्धिक वा लेखकलाई सबैले मन पराइदिएको त राम्रो हो तर दुनियाँमा सबैले मन पराउने केही पनि छैन, खास गरी चिन्तन परम्पराका सन्दर्भमा । यो वृत्तमा अलोकप्रिय भइएला कि त्यो वृत्तमा भन्दाभन्दै राम्रै खुबीका कतिपय लेखकहरू हेर्दाहेर्दै भुत्ते भएका अनगिन्ती उदाहरण समकालीन नेपालमै बग्रेल्ती छन् । त्यसबाहेक, एउटा अर्को थरीको सानो वृत्त छ नेपालमा, जसले ज्ञान परम्पराको शुद्धतावादी ‘जजमानी’ गर्छ । तिनीहरूको सधैंको गुनासो हुन्छ— नेपालको बौद्धिकता विकास नभएको तिनका कुरा अरूले नसुनेर हो। आजीवन ज्ञानकर्मलाई नै पेसा बनाएका र अनुसन्धानमा जजमानी गरेका बाहेक अरूले ‘बौद्धिक’ कुरा गरेको नै सुहाउँदैन भन्ने आग्रह पनि हुन्छ तिनीहरूको। तिनका कुरा त बरु रोचक नै लाग्छन् किनकि तिनले कमसेकम मान्छेलाई एकै छिन भए पनि जुरुक्क पार्छन् । असहमत हुन जगाउँछन् । प्रतिक्रियास्वरूप नै भए पनि, अरूबाट थप संकथनको सृजना गराउँछन् ।
कार्ल माक्र्स नभइदिएका भए समाजलाई हेर्ने हामी धेरैको विश्वदृष्टि जे छ,त्यो अहिले भएको जस्तो हुने थिएन । पुँजीवाद पूर्णत: अँगालेका राष्ट्र नै किन नहोऊन्, श्रम, समानता र सामाजिक न्यायलाई हेर्ने विश्वदृष्टिमा माक्र्स कतै भेटिइहाल्छन् । त्यसैले विषयमाक्र्सको होइन। विषय नेपालमा मार्क्सवादी विचार परम्पराको छायाले देशको समग्र बौद्धिक परम्परालाई कसरी ओझेल पारेको छ भनेर हेर्नु हो। यो चिन्तन परम्पराले कसरी आफूबाहेक अरू परम्परासँग संवाद नै गर्दैन भन्ने हो। मार्क्सवादी सिद्धान्तले भन्छ— साहित्य, कला समाजको ऐना हुनुपर्छ। साहित्य, कला, संस्कृतिले सामाजिक यथार्थलाई उजागर गर्नुपर्छ। कलाको, विद्वत्ताको उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्य समाजलाई क्रान्तिका लागि, प्रगतिका लागि, अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ। त्यसले निमुखा वर्गको बोली बोल्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने सृजना फजुल हो। अन्यत्रका जस्तै, नेपालका प्रशिक्षण नलिएका तर वामपन्थी रुझानका बौद्धिकहरूको पनिज्ञान/सांस्कृतिक परम्परालाई हेर्ने दृष्टि यही हो।यसो सुन्दा, साहित्य, सृजना, कला सबैले समाजको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ भन्ने परम्परामा नराम्रो धेरै देखिँदैन।
तर समस्या यहीँनेर सुरु भइहाल्छ। समग्रमा मार्क्सवादी परम्पराका बौद्धिकहरूको विडम्बना के छ भने, उनीहरू नेपालकै आधुनिक कालका सांस्कृतिक परम्पराहरूसँग संवाद गर्न डराउँछन् । किनकि हरेक ज्ञान र सृजनालाई त्यो मजदुरका पक्षमा लेखिएको छ कि छैन, त्यसले ‘क्रान्ति’ को सेवा कसरी गर्छ, त्यसमा सामाजिक यथार्थवाद छ कि छैन भनेर हेर्नेबित्तिकै तिनीहरू लेखनाथ पौडयाल, माधवप्रसाद घिमिरेका सांस्कृतिक चेतका बारेमा खुलेर कुरा गर्न डराउँछन् । गरे भने पनि ‘डिसमिसिभ’ हिसाबमा गर्छन् । अरू त छाडौं, आधुनिक नेपालको चेत निर्माण गर्ने सांस्कृतिक अभियानमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै बारेमा विमर्श गर्न उनीहरू डराए । अझै डराउँछन् ।वैचारिक रूपमा आफ्नै अग्रणी भए पनि पारिजातकै ‘शिरीषको फूल’ को कति कुरा गर्नु ठीक होला भनेर हच्किन्छन् । के मदनमणि दीक्षितकी माधवी‘माधवी’ हुनु ठीक थियो ? त्यो चिन्तनले त्यहाँअरू सौन्दर्य परख गर्न दिँदैन। किनकि मार्क्सवादमा स्वच्छन्दताका लागि, बौद्धिक अराजकताका लागि, सृजनशील पागलपनका लागि छुट हुँदैन। बीपी कोइरालाको साहित्य वा विचारसँग ‘इन्गेज’ भयो भने त वामपन्थी ‘अछुत’ नै हुने खतरा अझै छ । सहमत हुनुपर्छ भन्ने त सवालै होइन। यहाँ बौद्धिक रूपमा पारस्परिक संवाद गर्ने कुरा मात्र गरिएको हो। यो चिन्तनले चौतर्फी रूपमा अरू बौद्धिक र सांस्कृतिक परम्परालाई एकै वाक्यमा ‘तत्कालीन सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने, सामन्तवादी र पुँजीवादी वर्गको सेवा गर्ने’ भनेर खारेज गर्छ।
अस्तित्ववादी बौद्धिक परम्परासँग उसले सामीप्य राख्न सक्दैन। मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छन्, केको अस्तित्ववाद? बेलुका के खाने भनेर संघर्ष गर्न लाग्नु कि जीवनको अर्थ खोज्न लाग्नु ? उत्तरआधुनिकता, विनिर्माण भनेका त बुर्जुवा अवधारणा हुन् !मोहनदास करम चन्द गान्धी पनि सुधार गर्न खोज्ने मान्छेसम्म हुन् तर गान्धीका कुरा मार्क्सवादसम्मत छैनन् !नेपालमा खासगरी ’३० र ’४० को दशकमा सामाजिक चेतना बढी भएका र शिक्षित युवाहरूको ठूलो पंक्ति वामपन्थी अभियानसँग जोडियो। त्यो सारा पंक्तिले नेपालकै आफ्नै ऐतिहासिक परम्परासँग नै अन्तरसंवाद गर्न सकेन । सबै सांस्कृतिक परम्परालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दै केवल खारेज गर्दै गयो। सबै विषयलाई मार्क्सवादी शुद्धताको कसीमा हेर्नुपर्ने भएकाले नेपालको आफ्नै जुन आंशिक पूर्वीय दार्शनिक परम्परा छ, त्यसमा बोल्न मिल्दैन जस्तो गर्छन्उनीहरू । मार्क्सवादी भएका कारण देवताका कुरामा नबोल्ने बुझ्न सकिन्छ तर त्यहाँबाट भगवान्लाई निकाल्दा जति बाँकी ज्ञान हुन्छ, त्यसमा कुरा गर्न पनि मार्क्सवादले दिँदैन। त्यो ज्ञानसँग सहमत हुनुपर्छ भनेको त हुँदै होइन। विषयसंवाद नै गर्न नहुने अछुतपन हो। किनकि मान्छेले आफैंले कुरा बुझ्न सक्छ, बुझ्नका लागि देववाणी नै जरुरी हुँदैन भनेर स्थापित नहुन्जेल संसारका प्राय: सबै ज्ञान परम्परामा भगवान्को अवधारणा जोडिएकै थियो। भगवान्ले भनेको भनेपछि मान्छेलाई पत्याउने बनाउन सजिलो हुन्थ्यो। तर मार्क्सवादी भएपछि बुद्धको दार्शनिक ज्ञान परम्परामा पनि सीमितबाहेक अन्तरक्रिया हुँदैन। जब तपाईं हरेक कुरामा माक्र्सले भनेजस्तो वर्गको सेवा खोज्नुहुन्छ तब तपाईंलाई लिओनार्दो दा भिन्चीको मोनालिसा अर्थहीन लाग्छ । शेक्सपियरकावियोगान्त किन महान् छन् भन्ने अनुमति तपाईंलाई हुँदैन। महाकवि देवकोटाको स्वच्छन्दतावादले गर्नुपर्ने वर्गको सेवा गर्दैन भन्ने लाग्छ।
साहित्य र कला समाजको ऐना भएको ठीक छ। तर व्यक्तिका निजत्वभित्र छिर्ने ‘गैरसामाजिक’ संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सुन्दर हुन्छ।माक्र्सले भनेजस्तै, दार्शनिकहरूले अहिलेसम्म (उनको बेलासम्म) केवल जीवन–जगत् के हो भन्ने मात्र कुरा गरे, खास दर्शनशास्त्रलेगर्नुपर्नेयी सबैको परिवर्तन हो भन्ने पनि ठीक छ । तर दर्शनशास्त्रको काम केही परिवर्तन गर्नु होइन भन्ने कुराको पनि अर्थ हुन्छ। जीवनको विसंगति र अर्थहीनताको कुरा गर्ने दर्शनको पनि अर्थ हुन्छ। यसो सोच्नोस् त, नेपालको वामपन्थी बौद्धिक वृत्तले आफ्नो सन्दर्भका रूपमा संवाद गर्ने नेपालकै बौद्धिक परम्परा अति साँघुरो लाग्दैन ? बाँकी विश्वसँग उनीहरूको संवाद हेर्नुस् त, कति डराई–डराई, आफ्नै गुरुकुलको कसले के भन्ने हो, आफ्नै पुरानो वाम अवचेतनले कता गाली गर्ने हो भनेर, तौलीतौली, सोचीसोची मात्र त्यसो गर्छन् ! वाम बौद्धिकहरू अझै पनि शीतयुद्घकालीन मार्क्सवादी शुद्घताको कैदमा आफैं कक्रक्क परेर बस्नुपरेको छ । त्यसले देशको आफ्नै ऐतिहासिक–सांस्कृतिक चेतसँग उन्मुक्त संवाद गर्न नदिएर बौद्धिक परम्पराको विकासमै संकुचन पैदा गरेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ २१:००